KALFADHKA RAAC subtitles September 29, 2020
KALFADHKA RAAC subtitles
Maanta oo Isniin ah Sebtember 7th, oo macnaheedu yahay xilligii ugaarsiga ee elk ayaa bilaabmay. Waxaan qarka u saareynaa orod gaagaaban, inaan isku diirino kahor tababarka xoogga. Waxaan rajeyneynaa inaanan ka careysiin ugaarsadayaasha. Waa in loo sameeyaa maalinta. Raxmaan! Halkan Aad ayaannu u gaaban nahay si aannu u daynno xayndaabkaas Halkaas 1 saac diirimaad la qabtay, tan xigta waa xoogaa dabacsanaan iyo jimicsi xoog leh. Hadda waxaan ku wajahan nahay garaashka, dhab ahaantii waan dhammaystiray kuwa dabacsanaanta. Kaliya tababarka xoogga ayaa haray! Taas waxaad ugu yeeraysaa kuleyl? Maanta waxaan sameynayaa xilliyada barafka On track ah. Waxaan markii hore qorsheynayay inaan aado "Ove berget" Laakiin ma aha wax lagu dhaqmi karo haddii aan la raacin. Iyo Arbacada maanta, oo macnaheedu yahay Emily waxay goor hore u ambabaxday Umeå. Taas oo adkeyneysa ku dhaganaanta qorshahaas. Laakiin wadada waa inay si fiican u qabataa. Marka waxaan sameyn doonaa taas maanta. Waxaan sii joogayaa hal maalin ka hor intaanan aadin Umeå. Waa tan boqoshaadii, oo si wanaagsan u qalalaysa. Wanaagsan Cimilo wanaagsan sidoo kale! Halkaas ayaan tagnaa, oo aan ku qabannay fadhigaas. Waxaan dareemayay xaalad qallafsan maanta, laakiin .. Aad uma xuma. Taasi waxay dhici doontaa xilligan oo kale, marka jidhkaagu culays badani saaran yahay. Qaabku wuu kala duwanaan doonaa. Muhiimadu waa in diirada la saaro hawsha gacanta lagu hayo oo aad sii wadato. Cajiib! Had iyo jeer ku qanac in lagu dhammeeyo kal-fadhi adag. Hadda xoogaa ayaan hoos u riixayaa goor dambe oo galabtana aniga qudhaydu waxaan yeelan doonaa kulan ka soo kabasho fudud. Waxaan u badan tahay inaan u raaco baaskiil wadid Waxaan joognaa Umeå. Waxay u badan tahay inaan gaariga xiro, hadda oo aan joogno magaalada. Khamiis Waxaan qorsheynayaa inaan sii joogo usbuuc ka badan Fiiri tan Waqtiga Taco Cunto! Waan gaajooday Joogsi kamaadan sameyn jidkaaga halkaan? Haa waan sameeyay. Waxaan ku lahaa eey kulul iyo xoogaa jalaato ah Stugun. Stugun gudaheeda Iyo kafee sidoo kale. Waan arkaa (lama maqli karo) Ugu yaraan waxaan ku aadnay jihada saxda ah Laakiin tiisii ​​ma shaqeyn doonto. Nope Nacalad Tani waa adiga qaladkaaga. Aynu rogno. Sug, hal daqiiqo sii hay, waxaan u maleynayaa inaan sameyn karno. Waan ogahay jidka, waxaad igu khiyaanaysay waddo kale Halkan ka daawo Halkaas ayaanu u jiheysanay, Biltema oo ku taal Ersboda Taas oo halkan taagan. Anaguna halkan ayaanu hoos u dhignaa Yup. Waxaan ubaahanahay inaan xaqqa qaadano, sidaan u fikirnay. Tani waa sida ay u socoto ... Haddaan xoogaa dib u noqonno oo aan bidix u qaadno waddada dhinac naga xigta, waan raaci karnaa taas. Haa, laakiin waxaan ka dhigi karnaa toobiye dariiqa dhexdiisa. Deyrka dhexdiisa Miyaynu samaynay? Haa, ugu dambeyntii waan sameynay. Cimilo qurux badan! Kaliya waxaan kuu hayaa hal su'aal Sidee ayuu geedkan geedku ugu maareeyey inuu halkaas ka baxo !? Taas ii sharax. Meelaha laga baxo oo dhan, geedkan yar ee geedku wuxuu doortay inuu ku noolaado isla meeshaas, midig dushiisa weyn. Ma jiraan wax kale oo dhagaxa ah Waxaa jira xoogaa koritaan jilicsan. Maya, si dirqi ah Geedkaas waa sidaada oo kale, doqon yar oo madax adag. Waxaan dhihi lahaa xoogaa looma baahna Haa, maahan meesha saxda ah ee lagu noolaado Waxaan la yaabanahay waxa uu geedku ka fikirayay goorta uu go’aansaday inuu halkaas ku noolaado. Taasi waa waali! Aad u xiiso badan Subax wanaagsan! Waa Sabti waana waqtigii xoogaa socod ah oo soconaya. Laakiin intaa ka hor waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo qaar ka mid ah su'aalahaaga. Waxaan go'aansaday inaan QnA ku yeesho sheekadayda 'Instagram Story' Marka waxaan u maleynayay inaan ka jawaabi doono qaar ka mid ah inta ka hartay vlog-ka. Waxaan helay su'aalo badan oo la mid ah, oo ku saabsan waxa aan ugu jeclahay shaqada iyo nooca bareegyada aan doorbido. Waxaan dhihi lahaa orodku waa nooca shaqada aan doorbido. Labadaba markay tahay tababbarka masaafada dheer iyo muddooyinka. Nooca gaarka ah ee socodku wax badan maahan. Kaliya waxay ku xiran tahay xaqiiqda ah inay tahay waxqabad jilicsan. Markaad aragto waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa kabo kabo ah. Waad ordi kartaa sidoo kale meel kasta, ha ahaato kaynta, wadada ama dusha sare. Wax badan kama badalayso. Marka si aad uga jawaabto su'aashaada. Orodku waa qaabka ugu fiican ee kala-goyn ah feker ahaanteyda. Ugu yaraan xagaaga. Iyo socodsiinta guud waa qaabka jimicsiga ee aan ugu jeclahay. Nooca jimicsiga ee ugu habboon, wuxuu noqon lahaa waqti dheer oo fiican oo aan buuraha ka baxo. Waqti si aad u hesho kala-goysyada qaar lagu dhammeeyo wadada! Hagaag wiilal! Waxaan ku bilaabanay 4x1000m xawaaraha xadka. Wejiga hore wuxuu ahaa 3:17 Saddexda kalena waxay ahaayeen abbaaraha 3: 13-3: 14. Iyadoo 2 daqiiqo oo nasasho ah inta udhaxeysa. Intaa kadib waxaan sameynay 10x200m Iyadoo 30 ilbiriqsi oo nasasho ah Waxay nagu qaateen qiyaastii 32 ilbiriqsi. Ka dibna 4x1000m markale. Waqtiyada dhabta ahi waxay ahaayeen 3:10 ... 3:07, 3:06 iyo 2:58 Kuwii ugu dambeeyay waxaa laga yaabaa inay dhaafeen xawaaraha marinka. Ma ahan midka ugu yar 2.58. Adag Waxaan helay su'aal ah inta jeer ee aan fadhiyo usbuuc kasta. Jawaabtuna waa 2-3. Guud ahaan marar badan ayaan sameeyaa xilliga dayrta. Halka usbuucyada qaarkood ay ka kooban yihiin illaa afar fadhi oo kala-goyn ah. Laakiin sida caadiga ah waxaan sameeyaa 2-3. Inbadan oo idinka mid ah ayaa isweydiineysay imisa saacadood oo jimicsi ah ayaan helayaa todobaad kasta. Taas oo aad u kala duwan. Toddobaadyada qaarkood, markaan haysto kal-fadhiyo badan oo dheeri ah Tirada saacadaha waxay gaarayaan ilaa 30. Halka usbuucyo aan ku sameeyo faraqyo badan iyo shaqooyinka xasaasiyadda sare ... Ma awoodi doontid inaad jimicsi sameyso inta ugu badan, maxaa yeelay jirkaaga ayaa aad u daalan. Toddobaadyadaas waxay i heli doonaan oo kaliya jimicsi 15-20 saacadood ah. Toddobaad caadi ah hase yeeshe, wuxuu noqonayaa 20-25 saacadood. Laakiin waxay aad ugu tiirsan tahay nooca jimicsi ee aad sameyso usbuucaas iyo celceliska heerka xoojinta. Orod badan ayaa daadin doona muruqyadaada in ka badan barafka lagu ordo. Ma awoodi doontid inaad sameyso saacado badan oo aad ku ordo sidii aad ku sameyn laheyd barafka. Uma maleynayo inaad hagaajineyso tirada saacadaha jimicsiga. Diiradaada waa inay ahaato waxa jimicsigaagu ka kooban yahay. Laakiin haddii aad ogtahay inaad sameyneyso xasaasiyad sare, ma awoodi doontid inaad sameyso 30 saacadood toddobaad. Kalfadhigani wuxuu iiga yaraaday 1.5h Taas oo macnaheedu yahay inay ahayd mid adag. Oo waxaad u baahan tahay inaad waxbadan ka qabatid kuwan si aad uhesho 30 saacadood. Jawaabtu waxay tahay inay aad u kaladuwan tahay, waxay kuxirantahay nooca jimicsiga aad sameyneyso. Waxaan haystaa 6 maalmood oo jimicsi ah toddobaad kasta, iyo ku dhowaad had iyo jeer laba kal-fadhi maalintii. Kaas oo i siinaya 12 kal fadhi todobaadkii. Had iyo jeer waxaan heystaa maalin nasasho. Taasi waxay ahayd 30 ilbiriqsi. Maxaad sameyneysaa Waxaan qabanayaa barashada mootada. Ma sameyn kartaa tan? Dabcan. Qabo Halkaas Suaal baan kuu hayaa Sideed ku bixisay milyanka? Tani maahan jawaabta aad raadineysay, laakiin asal ahaan ma aanan helin. Waan keydsanayaa Casho waad noo soo iibinaysaa caawa? Hubaal, waan sameyn karaa taas. Runtii wax badan kuma qaadan. Waxaan u soconaa inaan xoogaa cunto helno. Emily ayaa ii diideysa inaan wado wado. Aad baad ugu xun tahay. Way fiicantahay in kan awooda uu ku jiro kursiga wadayaasha. La iima oggola in aan kaxeeyo maxaa yeelay waxaan dhex dhexaad uga dhigay jidadka la maro iyo meelaha la gooyo oo waxoogaa yar ayaan uga tagayaa gaariga. Markaa waxay dareemeysaa inay aniga iga xishoonayso! Taasi waa sababta aan la ii oggoleyn ... Muddo intee le'eg ayaynu ahayn coul? In ka badan afar sano. 4 sano. Oo wali way iga xishoonaysaa. Su’aasha xigta waxay tahay; Maxaan sameyn lahaa haddii aanan sidan sameynayn? Maxaan sameyn doonaa markii shaqadayda barafku dhammaato? Waa lama oga. Waxaan haystaa wax yar oo aan doonayo inaan sameeyo. Waxaan xoogaa xiiseynayaa barashada qorista-dhismaha. Wax la sameeyo dhismaha. Laakiin sidoo kale waxaan haystaa fikrad ah inaan jeclaan lahaa inaan barto injineernimada korantada. Waxaan u arkaa wax aad u xiiso badan. Waxaan hayaa fikrado badan. Laakiin waan arki doonaa waxa aan ku dhammaado. Wanaagsan! Dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado nooc ka mid ah isboortiga. Ma jecli inaan taas si buuxda u bixiyo. Waa kan casho. Sushi Waa inaan dalbaday dheeri ah. Laakiin wax kastoo, tan ayaa sameyn doonta. Cunto badan. Yum Tani way adagtahay. Laakiin waan maareeyaa. Waan sii wadi doonnaa QnA toddobaadyada soo socda vlog. Si aan uga jawaabo qaar ka mid ah su'aalahaaga. Waxaan halkaan ku soo afjarayaa Like saar oo subscribe dheh, si aadan u dhaafin qeybta dambe. Waxaan joogi doonnaa Sollefteå dhammaadka midkaas. Waxaan halkaa u jiheysan doonaa maalinta jimcaha waxaan aaminsanahay Way fiicnaan doontaa. Waad ku mahadsantahay daawashadaada! Waan ku arki doonaa Nabadeey!
<text sub="clublinks" start="18.36" dur="2.04"> Maanta oo Isniin ah </text>
<text sub="clublinks" start="20.66" dur="4.92"> Sebtember 7th, oo macnaheedu yahay xilligii ugaarsiga ee elk ayaa bilaabmay. </text>
<text sub="clublinks" start="25.76" dur="5.34"> Waxaan qarka u saareynaa orod gaagaaban, inaan isku diirino kahor tababarka xoogga. </text>
<text sub="clublinks" start="31.1" dur="4.32"> Waxaan rajeyneynaa inaanan ka careysiin ugaarsadayaasha. </text>
<text sub="clublinks" start="35.62" dur="3.86"> Waa in loo sameeyaa maalinta. </text>
<text sub="clublinks" start="55.84" dur="1.4"> Raxmaan! </text>
<text sub="clublinks" start="57.86" dur="1"> Halkan </text>
<text sub="clublinks" start="63.52" dur="2.68"> Aad ayaannu u gaaban nahay si aannu u daynno xayndaabkaas </text>
<text sub="clublinks" start="70.58" dur="1"> Halkaas </text>
<text sub="clublinks" start="72.08" dur="4.8"> 1 saac diirimaad la qabtay, tan xigta waa xoogaa dabacsanaan iyo jimicsi xoog leh. </text>
<text sub="clublinks" start="76.88" dur="4.48"> Hadda waxaan ku wajahan nahay garaashka, dhab ahaantii waan dhammaystiray kuwa dabacsanaanta. </text>
<text sub="clublinks" start="81.36" dur="1.66"> Kaliya tababarka xoogga ayaa haray! </text>
<text sub="clublinks" start="83.02" dur="1.74"> Taas waxaad ugu yeeraysaa kuleyl? </text>
<text sub="clublinks" start="90.94" dur="3.02"> Maanta waxaan sameynayaa xilliyada barafka </text>
<text sub="clublinks" start="94.56" dur="1.56"> On track ah. </text>
<text sub="clublinks" start="96.46" dur="3.36"> Waxaan markii hore qorsheynayay inaan aado "Ove berget" </text>
<text sub="clublinks" start="100.18" dur="3.88"> Laakiin ma aha wax lagu dhaqmi karo haddii aan la raacin. </text>
<text sub="clublinks" start="104.32" dur="5.5"> Iyo Arbacada maanta, oo macnaheedu yahay Emily waxay goor hore u ambabaxday Umeå. </text>
<text sub="clublinks" start="109.82" dur="3.66"> Taas oo adkeyneysa ku dhaganaanta qorshahaas. </text>
<text sub="clublinks" start="113.62" dur="2.78"> Laakiin wadada waa inay si fiican u qabataa. </text>
<text sub="clublinks" start="116.4" dur="2.04"> Marka waxaan sameyn doonaa taas maanta. </text>
<text sub="clublinks" start="118.66" dur="4.22"> Waxaan sii joogayaa hal maalin ka hor intaanan aadin Umeå. </text>
<text sub="clublinks" start="130.54" dur="4.2"> Waa tan boqoshaadii, oo si wanaagsan u qalalaysa. </text>
<text sub="clublinks" start="135.34" dur="1"> Wanaagsan </text>
<text sub="clublinks" start="137.24" dur="1.68"> Cimilo wanaagsan sidoo kale! </text>
<text sub="clublinks" start="160.56" dur="3.44"> Halkaas ayaan tagnaa, oo aan ku qabannay fadhigaas. </text>
<text sub="clublinks" start="164.82" dur="3.28"> Waxaan dareemayay xaalad qallafsan maanta, laakiin .. </text>
<text sub="clublinks" start="168.54" dur="2.82"> Aad uma xuma. </text>
<text sub="clublinks" start="171.54" dur="4.02"> Taasi waxay dhici doontaa xilligan oo kale, marka jidhkaagu culays badani saaran yahay. </text>
<text sub="clublinks" start="175.88" dur="2.5"> Qaabku wuu kala duwanaan doonaa. </text>
<text sub="clublinks" start="178.52" dur="5.72"> Muhiimadu waa in diirada la saaro hawsha gacanta lagu hayo oo aad sii wadato. </text>
<text sub="clublinks" start="185.28" dur="1.62"> Cajiib! </text>
<text sub="clublinks" start="186.9" dur="4.14"> Had iyo jeer ku qanac in lagu dhammeeyo kal-fadhi adag. </text>
<text sub="clublinks" start="191.06" dur="5.14"> Hadda xoogaa ayaan hoos u riixayaa goor dambe oo galabtana aniga qudhaydu waxaan yeelan doonaa kulan ka soo kabasho fudud. </text>
<text sub="clublinks" start="196.2" dur="2.44"> Waxaan u badan tahay inaan u raaco baaskiil wadid </text>
<text sub="clublinks" start="205.74" dur="1.5"> Waxaan joognaa Umeå. </text>
<text sub="clublinks" start="207.38" dur="3.2"> Waxay u badan tahay inaan gaariga xiro, hadda oo aan joogno magaalada. </text>
<text sub="clublinks" start="210.82" dur="1.76"> Khamiis </text>
<text sub="clublinks" start="214.18" dur="3.36"> Waxaan qorsheynayaa inaan sii joogo usbuuc ka badan </text>
<text sub="clublinks" start="218.1" dur="1.22"> Fiiri tan </text>
<text sub="clublinks" start="220.74" dur="1.46"> Waqtiga Taco </text>
<text sub="clublinks" start="223.36" dur="1.22"> Cunto! </text>
<text sub="clublinks" start="225.76" dur="1.9"> Waan gaajooday </text>
<text sub="clublinks" start="229.16" dur="2.72"> Joogsi kamaadan sameyn jidkaaga halkaan? </text>
<text sub="clublinks" start="232.02" dur="1.56"> Haa waan sameeyay. </text>
<text sub="clublinks" start="234.16" dur="3.46"> Waxaan ku lahaa eey kulul iyo xoogaa jalaato ah Stugun. </text>
<text sub="clublinks" start="238" dur="1.02"> Stugun gudaheeda </text>
<text sub="clublinks" start="239.26" dur="1.04"> Iyo kafee sidoo kale. </text>
<text sub="clublinks" start="240.4" dur="0.7"> Waan arkaa </text>
<text sub="clublinks" start="242.8" dur="1.48"> (lama maqli karo) </text>
<text sub="clublinks" start="245.22" dur="2.48"> Ugu yaraan waxaan ku aadnay jihada saxda ah </text>
<text sub="clublinks" start="247.86" dur="1.44"> Laakiin tiisii ​​ma shaqeyn doonto. </text>
<text sub="clublinks" start="249.54" dur="0.94"> Nope </text>
<text sub="clublinks" start="251.06" dur="0.8"> Nacalad </text>
<text sub="clublinks" start="252.24" dur="1.64"> Tani waa adiga qaladkaaga. </text>
<text sub="clublinks" start="254.02" dur="1.64"> Aynu rogno. </text>
<text sub="clublinks" start="255.66" dur="3.06"> Sug, hal daqiiqo sii hay, waxaan u maleynayaa inaan sameyn karno. </text>
<text sub="clublinks" start="258.72" dur="3.26"> Waan ogahay jidka, waxaad igu khiyaanaysay waddo kale </text>
<text sub="clublinks" start="261.98" dur="1.82"> Halkan ka daawo </text>
<text sub="clublinks" start="264.22" dur="3.46"> Halkaas ayaanu u jiheysanay, Biltema oo ku taal Ersboda </text>
<text sub="clublinks" start="269.3" dur="2.02"> Taas oo halkan taagan. </text>
<text sub="clublinks" start="271.32" dur="2"> Anaguna halkan ayaanu hoos u dhignaa </text>
<text sub="clublinks" start="273.48" dur="1.9"> Yup. </text>
<text sub="clublinks" start="278.3" dur="3.04"> Waxaan ubaahanahay inaan xaqqa qaadano, sidaan u fikirnay. </text>
<text sub="clublinks" start="281.34" dur="1.9"> Tani waa sida ay u socoto ... </text>
<text sub="clublinks" start="283.78" dur="4.4"> Haddaan xoogaa dib u noqonno oo aan bidix u qaadno waddada dhinac naga xigta, waan raaci karnaa taas. </text>
<text sub="clublinks" start="288.18" dur="3.14"> Haa, laakiin waxaan ka dhigi karnaa toobiye dariiqa dhexdiisa. </text>
<text sub="clublinks" start="291.32" dur="1.28"> Deyrka dhexdiisa </text>
<text sub="clublinks" start="293.16" dur="1.72"> Miyaynu samaynay? </text>
<text sub="clublinks" start="294.88" dur="2"> Haa, ugu dambeyntii waan sameynay. </text>
<text sub="clublinks" start="298.62" dur="1.54"> Cimilo qurux badan! </text>
<text sub="clublinks" start="300.3" dur="2.22"> Kaliya waxaan kuu hayaa hal su'aal </text>
<text sub="clublinks" start="302.62" dur="3.58"> Sidee ayuu geedkan geedku ugu maareeyey inuu halkaas ka baxo !? </text>
<text sub="clublinks" start="306.2" dur="1.98"> Taas ii sharax. </text>
<text sub="clublinks" start="308.18" dur="4"> Meelaha laga baxo oo dhan, geedkan yar ee geedku wuxuu doortay inuu ku noolaado isla meeshaas, midig dushiisa weyn. </text>
<text sub="clublinks" start="312.2" dur="1.76"> Ma jiraan wax kale oo dhagaxa ah </text>
<text sub="clublinks" start="313.96" dur="1.7"> Waxaa jira xoogaa koritaan jilicsan. </text>
<text sub="clublinks" start="315.66" dur="1.24"> Maya, si dirqi ah </text>
<text sub="clublinks" start="317.28" dur="3.12"> Geedkaas waa sidaada oo kale, doqon yar oo madax adag. </text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="2.46"> Waxaan dhihi lahaa xoogaa looma baahna </text>
<text sub="clublinks" start="322.86" dur="2.36"> Haa, maahan meesha saxda ah ee lagu noolaado </text>
<text sub="clublinks" start="325.42" dur="3.76"> Waxaan la yaabanahay waxa uu geedku ka fikirayay goorta uu go’aansaday inuu halkaas ku noolaado. </text>
<text sub="clublinks" start="329.18" dur="1.4"> Taasi waa waali! </text>
<text sub="clublinks" start="330.66" dur="1.64"> Aad u xiiso badan </text>
<text sub="clublinks" start="345.48" dur="1.48"> Subax wanaagsan! </text>
<text sub="clublinks" start="347.08" dur="3.82"> Waa Sabti waana waqtigii xoogaa socod ah oo soconaya. </text>
<text sub="clublinks" start="351.28" dur="4.98"> Laakiin intaa ka hor waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo qaar ka mid ah su'aalahaaga. </text>
<text sub="clublinks" start="357.14" dur="4.04"> Waxaan go'aansaday inaan QnA ku yeesho sheekadayda 'Instagram Story' </text>
<text sub="clublinks" start="361.64" dur="4.16"> Marka waxaan u maleynayay inaan ka jawaabi doono qaar ka mid ah inta ka hartay vlog-ka. </text>
<text sub="clublinks" start="366.78" dur="7.12"> Waxaan helay su'aalo badan oo la mid ah, oo ku saabsan waxa aan ugu jeclahay shaqada iyo nooca bareegyada aan doorbido. </text>
<text sub="clublinks" start="374.46" dur="4.84"> Waxaan dhihi lahaa orodku waa nooca shaqada aan doorbido. </text>
<text sub="clublinks" start="379.3" dur="3.86"> Labadaba markay tahay tababbarka masaafada dheer iyo muddooyinka. </text>
<text sub="clublinks" start="383.16" dur="4.16"> Nooca gaarka ah ee socodku wax badan maahan. </text>
<text sub="clublinks" start="387.32" dur="3.34"> Kaliya waxay ku xiran tahay xaqiiqda ah inay tahay waxqabad jilicsan. </text>
<text sub="clublinks" start="390.74" dur="2.78"> Markaad aragto waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa kabo kabo ah. </text>
<text sub="clublinks" start="393.52" dur="4.5"> Waad ordi kartaa sidoo kale meel kasta, ha ahaato kaynta, wadada ama dusha sare. </text>
<text sub="clublinks" start="398.6" dur="2.78"> Wax badan kama badalayso. </text>
<text sub="clublinks" start="401.52" dur="3.98"> Marka si aad uga jawaabto su'aashaada. Orodku waa qaabka ugu fiican ee kala-goyn ah feker ahaanteyda. </text>
<text sub="clublinks" start="405.5" dur="1.74"> Ugu yaraan xagaaga. </text>
<text sub="clublinks" start="407.24" dur="4"> Iyo socodsiinta guud waa qaabka jimicsiga ee aan ugu jeclahay. </text>
<text sub="clublinks" start="411.24" dur="5.28"> Nooca jimicsiga ee ugu habboon, wuxuu noqon lahaa waqti dheer oo fiican oo aan buuraha ka baxo. </text>
<text sub="clublinks" start="418.76" dur="3.38"> Waqti si aad u hesho kala-goysyada qaar lagu dhammeeyo wadada! </text>
<text sub="clublinks" start="482.56" dur="1.6"> Hagaag wiilal! </text>
<text sub="clublinks" start="484.7" dur="4.44"> Waxaan ku bilaabanay 4x1000m xawaaraha xadka. </text>
<text sub="clublinks" start="489.9" dur="3.56"> Wejiga hore wuxuu ahaa 3:17 </text>
<text sub="clublinks" start="495.1" dur="4.9"> Saddexda kalena waxay ahaayeen abbaaraha 3: 13-3: 14. </text>
<text sub="clublinks" start="500.02" dur="2.72"> Iyadoo 2 daqiiqo oo nasasho ah inta udhaxeysa. </text>
<text sub="clublinks" start="503.58" dur="2.66"> Intaa kadib waxaan sameynay 10x200m </text>
<text sub="clublinks" start="506.62" dur="3.34"> Iyadoo 30 ilbiriqsi oo nasasho ah </text>
<text sub="clublinks" start="510.86" dur="2.28"> Waxay nagu qaateen qiyaastii 32 ilbiriqsi. </text>
<text sub="clublinks" start="513.54" dur="2.76"> Ka dibna 4x1000m markale. </text>
<text sub="clublinks" start="516.3" dur="3.16"> Waqtiyada dhabta ahi waxay ahaayeen 3:10 ... </text>
<text sub="clublinks" start="520.2" dur="3"> 3:07, 3:06 iyo 2:58 </text>
<text sub="clublinks" start="523.56" dur="4.12"> Kuwii ugu dambeeyay waxaa laga yaabaa inay dhaafeen xawaaraha marinka. </text>
<text sub="clublinks" start="528.12" dur="2.88"> Ma ahan midka ugu yar 2.58. </text>
<text sub="clublinks" start="532.02" dur="1.06"> Adag </text>
<text sub="clublinks" start="534.26" dur="3.94"> Waxaan helay su'aal ah inta jeer ee aan fadhiyo usbuuc kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="538.56" dur="2.24"> Jawaabtuna waa 2-3. </text>
<text sub="clublinks" start="540.8" dur="2.76"> Guud ahaan marar badan ayaan sameeyaa xilliga dayrta. </text>
<text sub="clublinks" start="543.56" dur="3.32"> Halka usbuucyada qaarkood ay ka kooban yihiin illaa afar fadhi oo kala-goyn ah. </text>
<text sub="clublinks" start="546.88" dur="1.78"> Laakiin sida caadiga ah waxaan sameeyaa 2-3. </text>
<text sub="clublinks" start="548.66" dur="4.24"> Inbadan oo idinka mid ah ayaa isweydiineysay imisa saacadood oo jimicsi ah ayaan helayaa todobaad kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="553.08" dur="2.16"> Taas oo aad u kala duwan. </text>
<text sub="clublinks" start="555.7" dur="5.08"> Toddobaadyada qaarkood, markaan haysto kal-fadhiyo badan oo dheeri ah </text>
<text sub="clublinks" start="561.1" dur="4.08"> Tirada saacadaha waxay gaarayaan ilaa 30. </text>
<text sub="clublinks" start="565.18" dur="3.92"> Halka usbuucyo aan ku sameeyo faraqyo badan iyo shaqooyinka xasaasiyadda sare ... </text>
<text sub="clublinks" start="569.1" dur="4.08"> Ma awoodi doontid inaad jimicsi sameyso inta ugu badan, maxaa yeelay jirkaaga ayaa aad u daalan. </text>
<text sub="clublinks" start="573.2" dur="3.68"> Toddobaadyadaas waxay i heli doonaan oo kaliya jimicsi 15-20 saacadood ah. </text>
<text sub="clublinks" start="576.94" dur="3.32"> Toddobaad caadi ah hase yeeshe, wuxuu noqonayaa 20-25 saacadood. </text>
<text sub="clublinks" start="580.44" dur="5.38"> Laakiin waxay aad ugu tiirsan tahay nooca jimicsi ee aad sameyso usbuucaas iyo celceliska heerka xoojinta. </text>
<text sub="clublinks" start="585.82" dur="3.9"> Orod badan ayaa daadin doona muruqyadaada in ka badan barafka lagu ordo. </text>
<text sub="clublinks" start="589.78" dur="4.68"> Ma awoodi doontid inaad sameyso saacado badan oo aad ku ordo sidii aad ku sameyn laheyd barafka. </text>
<text sub="clublinks" start="594.46" dur="4.38"> Uma maleynayo inaad hagaajineyso tirada saacadaha jimicsiga. </text>
<text sub="clublinks" start="598.84" dur="2.94"> Diiradaada waa inay ahaato waxa jimicsigaagu ka kooban yahay. </text>
<text sub="clublinks" start="601.96" dur="5.22"> Laakiin haddii aad ogtahay inaad sameyneyso xasaasiyad sare, ma awoodi doontid inaad sameyso 30 saacadood toddobaad. </text>
<text sub="clublinks" start="609.8" dur="3.18"> Kalfadhigani wuxuu iiga yaraaday 1.5h </text>
<text sub="clublinks" start="613.54" dur="4.38"> Taas oo macnaheedu yahay inay ahayd mid adag. </text>
<text sub="clublinks" start="618.26" dur="5"> Oo waxaad u baahan tahay inaad waxbadan ka qabatid kuwan si aad uhesho 30 saacadood. </text>
<text sub="clublinks" start="623.8" dur="4.84"> Jawaabtu waxay tahay inay aad u kaladuwan tahay, waxay kuxirantahay nooca jimicsiga aad sameyneyso. </text>
<text sub="clublinks" start="629.06" dur="5.86"> Waxaan haystaa 6 maalmood oo jimicsi ah toddobaad kasta, iyo ku dhowaad had iyo jeer laba kal-fadhi maalintii. </text>
<text sub="clublinks" start="635.38" dur="2.72"> Kaas oo i siinaya 12 kal fadhi todobaadkii. </text>
<text sub="clublinks" start="638.1" dur="1.58"> Had iyo jeer waxaan heystaa maalin nasasho. </text>
<text sub="clublinks" start="643.96" dur="1.5"> Taasi waxay ahayd 30 ilbiriqsi. </text>
<text sub="clublinks" start="645.46" dur="1.76"> Maxaad sameyneysaa </text>
<text sub="clublinks" start="647.22" dur="2.06"> Waxaan qabanayaa barashada mootada. </text>
<text sub="clublinks" start="649.32" dur="1.1"> Ma sameyn kartaa tan? </text>
<text sub="clublinks" start="650.68" dur="1.22"> Dabcan. </text>
<text sub="clublinks" start="652.06" dur="0.84"> Qabo </text>
<text sub="clublinks" start="656.22" dur="1"> Halkaas </text>
<text sub="clublinks" start="659.56" dur="2.92"> Suaal baan kuu hayaa </text>
<text sub="clublinks" start="662.72" dur="3.08"> Sideed ku bixisay milyanka? </text>
<text sub="clublinks" start="666.48" dur="4.68"> Tani maahan jawaabta aad raadineysay, laakiin asal ahaan ma aanan helin. </text>
<text sub="clublinks" start="671.16" dur="1.38"> Waan keydsanayaa </text>
<text sub="clublinks" start="672.54" dur="3.28"> Casho waad noo soo iibinaysaa caawa? </text>
<text sub="clublinks" start="676.3" dur="1.74"> Hubaal, waan sameyn karaa taas. </text>
<text sub="clublinks" start="678.68" dur="2.82"> Runtii wax badan kuma qaadan. </text>
<text sub="clublinks" start="681.72" dur="2.28"> Waxaan u soconaa inaan xoogaa cunto helno. </text>
<text sub="clublinks" start="685.14" dur="2.62"> Emily ayaa ii diideysa inaan wado wado. </text>
<text sub="clublinks" start="688.98" dur="1.9"> Aad baad ugu xun tahay. </text>
<text sub="clublinks" start="691.38" dur="3.44"> Way fiicantahay in kan awooda uu ku jiro kursiga wadayaasha. </text>
<text sub="clublinks" start="695.06" dur="7.66"> La iima oggola in aan kaxeeyo maxaa yeelay waxaan dhex dhexaad uga dhigay jidadka la maro iyo meelaha la gooyo oo waxoogaa yar ayaan uga tagayaa gaariga. </text>
<text sub="clublinks" start="703.02" dur="3.44"> Markaa waxay dareemeysaa inay aniga iga xishoonayso! </text>
<text sub="clublinks" start="706.54" dur="3.04"> Taasi waa sababta aan la ii oggoleyn ... </text>
<text sub="clublinks" start="710.52" dur="2.86"> Muddo intee le'eg ayaynu ahayn coul? </text>
<text sub="clublinks" start="713.56" dur="1.54"> In ka badan afar sano. </text>
<text sub="clublinks" start="715.86" dur="1"> 4 sano. </text>
<text sub="clublinks" start="717.14" dur="2.18"> Oo wali way iga xishoonaysaa. </text>
<text sub="clublinks" start="719.32" dur="3.46"> Su’aasha xigta waxay tahay; Maxaan sameyn lahaa haddii aanan sidan sameynayn? </text>
<text sub="clublinks" start="723.1" dur="2.84"> Maxaan sameyn doonaa markii shaqadayda barafku dhammaato? </text>
<text sub="clublinks" start="726.72" dur="3.26"> Waa lama oga. Waxaan haystaa wax yar oo aan doonayo inaan sameeyo. </text>
<text sub="clublinks" start="729.98" dur="3.14"> Waxaan xoogaa xiiseynayaa barashada qorista-dhismaha. </text>
<text sub="clublinks" start="733.9" dur="4.14"> Wax la sameeyo dhismaha. </text>
<text sub="clublinks" start="738.6" dur="5.86"> Laakiin sidoo kale waxaan haystaa fikrad ah inaan jeclaan lahaa inaan barto injineernimada korantada. </text>
<text sub="clublinks" start="744.46" dur="3.04"> Waxaan u arkaa wax aad u xiiso badan. </text>
<text sub="clublinks" start="747.5" dur="2.4"> Waxaan hayaa fikrado badan. </text>
<text sub="clublinks" start="750.28" dur="2.4"> Laakiin waan arki doonaa waxa aan ku dhammaado. </text>
<text sub="clublinks" start="752.88" dur="1.1"> Wanaagsan! </text>
<text sub="clublinks" start="754.2" dur="4.74"> Dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado nooc ka mid ah isboortiga. </text>
<text sub="clublinks" start="760.84" dur="3.34"> Ma jecli inaan taas si buuxda u bixiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="764.42" dur="1.72"> Waa kan casho. </text>
<text sub="clublinks" start="771.6" dur="4.42"> Waa inaan dalbaday dheeri ah. Laakiin wax kastoo, tan ayaa sameyn doonta. </text>
<text sub="clublinks" start="776.18" dur="1.48"> Cunto badan. </text>
<text sub="clublinks" start="778.58" dur="1.06"> Yum </text>
<text sub="clublinks" start="780.92" dur="1.96"> Tani way adagtahay. </text>
<text sub="clublinks" start="783.56" dur="2.28"> Laakiin waan maareeyaa. </text>
<text sub="clublinks" start="785.98" dur="5.74"> Waan sii wadi doonnaa QnA toddobaadyada soo socda vlog. Si aan uga jawaabo qaar ka mid ah su'aalahaaga. </text>
<text sub="clublinks" start="791.72" dur="2"> Waxaan halkaan ku soo afjarayaa </text>
<text sub="clublinks" start="793.72" dur="3.54"> Like saar oo subscribe dheh, si aadan u dhaafin qeybta dambe. </text>
<text sub="clublinks" start="797.68" dur="5.88"> Waxaan joogi doonnaa Sollefteå dhammaadka midkaas. </text>
<text sub="clublinks" start="804" dur="2.54"> Waxaan halkaa u jiheysan doonaa maalinta jimcaha waxaan aaminsanahay </text>
<text sub="clublinks" start="808.06" dur="1.52"> Way fiicnaan doontaa. </text>
<text sub="clublinks" start="809.58" dur="2.02"> Waad ku mahadsantahay daawashadaada! </text>
<text sub="clublinks" start="811.6" dur="1.92"> Waan ku arki doonaa Nabadeey! </text>